Al-shabaab oo degmada Jilib ku gubay dhowr gaadiid oo ay ka shakiyeen inay qalab ku xiran yihiin – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo degmada Jilib ku gubay dhowr gaadiid oo ay ka shakiyeen inay qalab ku xiran yihiin
Wararka naga soo gaaraya degmada Jilib ee gobolka J/dhexe ayaa waxay sheegayaan in Xarakada Al-shabaab ay shalay gelinkii dambe halkaasi ku gubeen 5 gaari sida la sheegay ay leeyihiin dad shacab ah oo ka mid ah dadka deegaanka degmadaas.
Al-shabaab ayaa 5-taas gaari ku gubay goob fagaare ah, waxaana ay Shabaab sheegeen inay ka shakiyeen inay ku xiran yihiin waxyaabo basaasnimo ah oo jiheeya inta badan diyaaradaha duqeynta ka geysta degmada Jilib.
Sidoo kale, qaar ka mid ah dadka u daawashada tagay gaadiidkaasi lagu gubay degmada Jilib oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay timid kadib markii shaki laga qaaday in qalab basaasnimo ay ku xiran yihiin gaadiidkaas.
Dhinaca kale, ciidamada Al-shabaab ayaa baaritaano ku bilaabay dadkii lahaa 5-taas gaari, waxaana hadal heynta ugu weyn degmada Jilib ee maanta ay tahay gaadiidkaasi gelinkii dambe ee shalay halkaasi lagu gubay.
Si kastaba ha ahaatee, Al-shabaab ayaa hore deegaanadda ay gacanta ku haayaan uga mamnuucay isticmaalka teleefanada gacanta ee loo yaqaano (Smart phone-ka) oo ay ku eedeeyeen inay yihiin kuwa diyaaradaha Mareykanka u sahli kara arrimaha basaasnimada, islamarkaana diyaaradahaasi ay duqeyn ka geystaan xarumaha ay gobolka J/dhexe kaga sugan yihiin saraakiisha sare ee ka tirsan Xarakada Al-shabaab.